I-25 STYLISH HAIRCUTS YAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Ukucheba kweenwele zamadoda ezi-25
Eyona Iinwele Zamadoda Ukucheba kweenwele zamadoda ezi-25
Izinwele ezintsha zamadoda ezinesitayile ziyenziwa minyaka le, kwaye oko kuthetha ukuba yinto nje yokufumana ezona ndlela zisikiweyo kunye nezitayile ezokusebenzela. Kwi…
Izinwele ezintsha zamadoda ezinesitayile ziyenziwa minyaka le, kwaye oko kuthetha ukuba yinto nje yokufumana ezona ndlela zisikiweyo kunye nezitayile ezokusebenzela. Kwiminyaka apho ulutsha, ihipsters, kunye namadoda aphakathi aphakathi bezemidlalo bezinwele ezinesitayile njenge-quiff, ifeksi , ubuyele umva engaphantsi , kunye nomphetho odidayo, akukho sizathu sokuba nawuphi na umntu aqhubeke enxibe iinwele ezikruqulayo. Ukuba ujonga iinwele ezinesitayile ezipholileyo zamadoda, ke uya kusithanda isikhokelo sethu kwezona zinwele zishushu zamadoda.
1Izinwele eziPhezulu eziPhezulu zaMadoda
MbiniUkuphela okuphezulu + kweCandelo eliLukhuni + leSpiky Comb ngaphezulu
3Icandelo Elinzima Elide Ukudibanisa Ukuphela + kweendevu ezinde ezinde
4Isikhumba siphela phantsi koLusu oluBuyisiweyo
5I-Bald Fade ephezulu + ye-Messy Spiky Izinwele + iindevu
6Ukuphela kweTaper Tade + Icandelo + lokuDibanisa ubuqaqawuli
7Quiff + Icwecwe elicociweyo + iindevu ezipheleleyo
8Ukucinywa koQhagamshelo olunqanyuliweyo + umphetho weenwele ezinde
9Utyikitye umva Undercut
10Ubude obuphakathi kweenwele eziPhuciweyo phezulu + Amacandelo amafutshane
Shumi elinanyeUmyalezo oneenwele ezilungisiweyo + oPheleyo oPhakamileyo + ngentshebe engqindilili
12Phakathi kweRazor Fade + Umgca + weenwele eziBuyiselweyo
13Amacala amafutshane + neenwele ezinde ezinombala
14Ukuphela kweTempe + kumgca weenwele + ukudibanisa ixesha elide
Shumi elinantlanuNgaphantsi kwePompadour + iindevu
16I-Quiff yanamhlanje + yokuPhela okuPhakamileyo + ngokuPhezulu
17Iinwele ezinde eziBhulashiweyo + eziMfutshane
18Umyalezo weenwele eziMdaka + eziFumileyo ziMilo eziPhezulu
Izinwele eziPhezulu eziPhezulu zaMadoda
Mhlawumbi uvile ngazo zonke iinwele zakudala - ukusikwa kwe-buzz , abasebenzi abasikiweyo , icala icala , kunye Taper yeklasikhi -Kodwa zininzi iindlela zokufumana amacala amafutshane, umphezulu omde Iinwele ezithandwayo mva nje.
Umzekelo, ezinye iinwele zala maxesha, ezipholileyo ezihamba ngoku zibandakanya ikama ngaphezulu, imiphetho ebunjiweyo, ipompadour, kunye neenwele ze-spiky. Ezi zitayile zeenwele zakho ngaphezulu zidityaniswa kunye neendidi ezahlukeneyo zokuphela kunye nokucolwa emacaleni. Ngeendlela ezininzi zokurhafisa amacala akho, abafana banokhetho lokwenza ngokwezifiso iinwele zabo ezinesitayile kunye nesitayile.
amadoda aneenwele ezishinyeneyo
Ke ngaphandle kokunqongophala kweenwele zakho ezimfutshane, ezinde, ezingqindilili, ezithe nkqo, ezirhangqayo okanye ezigobileyo, kukho iinwele ezimangalisayo phaya ezenzelwe wena. Jonga igalari yethu yezona zinwele zinqwenelekayo zabafana ngaphambi kotyelelo lwakho olulandelayo kwindawo yokucheba iinwele kwaye siyathembisa ukuba uya kuphefumlelwa ukuba utshintshe inkangeleko yakho!
Ukuphela okuphezulu + kweCandelo eliLukhuni + leSpiky Comb ngaphezulu
Icandelo Elinzima Elide Ukudibanisa Ukuphela + kweendevu ezinde ezinde
Isikhumba siphela phantsi koLusu oluBuyisiweyo
I-Bald Fade ephezulu + ye-Messy Spiky Izinwele + iindevu
Ukuphela kweTaper Tade + Icandelo + lokuDibanisa ubuqaqawuli
Quiff + Icwecwe elicociweyo + iindevu ezipheleleyo
Ukucinywa koQhagamshelo olunqanyuliweyo + umphetho weenwele ezinde
Ubude obuphakathi kweenwele eziPhuciweyo phezulu + Amacandelo amafutshane
Umyalezo oneenwele ezilungisiweyo + oPheleyo oPhakamileyo + ngentshebe engqindilili
Phakathi kweRazor Fade + Umgca + weenwele eziBuyiselweyo
Amacala amafutshane + neenwele ezinde ezinombala
Ukuphela kweTempe + kumgca weenwele + ukudibanisa ixesha elide
Ngaphantsi kwePompadour + iindevu
indlela yokufumana itshathi yakho yokuzalwa
I-Quiff yanamhlanje + yokuPhela okuPhakamileyo + ngokuPhezulu
Iinwele ezinde eziBhulashiweyo + eziMfutshane
Umyalezo weenwele eziMdaka + eziFumileyo ziMilo eziPhezulu
iindawo ezibuhlungu kakhulu kwi-tattoos
ukucheba intloko enkulu
iinwele ezinde taper ziyaphela
izimbo loc zamadoda